Lionel Messi oo ganaax la dul dhigay kaddib kaarkii roosaha uu qaatay kulankii Athletic Bilbao – Gool FM
Kooxaha Burnley iyo Arsenal oo barbardhac ku kala baxay… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Burnley iyo Arsenal ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Kahor kulanka Barcelona ee caawa… Imisa gool ayuu Lionel Messi ka dhaliyay kooxda Osasuna?
“Ma doonayo in kuwaan ay ila joogaan Liverpool.” – Jürgen Klopp
Kooxaha Juventus, Barcelona iyo PSG oo ku dagaalamaya saxiixa xiddig ka tirsan Manchester City
“Waxaan sameyn doonaa wax walba si aan xirfadeyda ugu soo gabagabeeyo Stamford Bridge.” – Xiddig hore Chelsea ah
Kooxaha, Arsenal, Barcelona, Juventus, Bayern Munich & Guud ahaan kulammada maanta iyo caawa laga ciyaari doono SHANTA horyaal ee ugu waa weyn Yurub
RASMI: Xiddigaha u sharraxan abaal-marinta laacibka bisha February ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay
Ronald Koeman oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha kooxdiisa Barcelona uga qeyb galaya kulanka Osasuna
“Mane wuxuu iska ilaalinayaa rigoorayaasha sababa la xiriira Mohamed Salah.” – Owen
Lionel Messi oo ganaax la dul dhigay kaddib kaarkii roosaha uu qaatay kulankii Athletic Bilbao
Dajiye January 19, 2021
(Madrid) 19 Jan 2021. Guddiga Tartamada ee Xiriirka Kubadda Cagta Spain ayaa maanta oo Talaado ah shaaciyay inay ganaax rasmi ah dul dhigeen xiddiga reer Argantina ee iyo kooxda Barcelona ee Lionel Messi.
Lionel Messi ayaa kaarka cas si toos ah u qaatay kaddib markii uu gacan toos ah ku dhuftay xiddig kooxda Athletic Bilbao ee Asier Villalibre, kulankii Final-ka ahaa ee koobka Spanish Super Cup.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday go’aanka guddiga Tartamada ee Xiriirka Kubadda Cagta Spain in Lionel Messi la dul dhigay ganaax labo kulan ah, sababa la xiriira farlkii uu kula kacay xiddig kooxda Athletic Bilbao ee Asier Villalibre.
Lionel Messi ayaa seegi doona kulanka ay kooxda Cornella kula ciyaari doonaan Copa del Rey habeenka khamiista soo socota, iyo kulanka Elche ee Axada soo socota, kaasoo ka tirsan kulamada Isbuuca 20-aad ee horyaalka La Liga.
Muxuu ka yiri Zidane kulanka Deportivo Alcoyano & wararka Real Madrid la xiriirinaya David Alaba??
Tababare Zidane oo si RASMI ah u shaaciyey liiska 20-ka ciyaaryahan ee Real Madrid uu kala qeyb galayo kulanka Deportivo Alcoyano